ओठ कालो भएर चिन्तितमा पर्नुभएको त छैन ? यसरी बनाउनुहोस् कालो ओठलाई गुलाफी र चम्किलो – Khabaarpati
November 18, 2020 November 18, 2020 Khabar PatiLeaveaComment on ओठ कालो भएर चिन्तितमा पर्नुभएको त छैन ? यसरी बनाउनुहोस् कालो ओठलाई गुलाफी र चम्किलो
चुकन्दर . ओठको कालोपन हटाउन चुकन्दर निकै नै उपयोगी फल हो । चुकन्दरलाई काटेर त्यसको टुक्रा ओठमा लगाउनाले ओठ गुलाफी र चम्किलो हुन्छ र ओठको कालोपन पनि हराएर जान्छ ।,,,भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोस्,,,
दुधको तर . दुधको तर पनि ओठको लागि निकै फाइदाजनक हुन्छ । यसले ओठको सुक्खापन हटाउनुका साथै कालोपन पनि कम गर्छ । दूधको तर लगाउनका लागि थोरै तरमा एक चिम्टी बेसारको धुलो मिसाएर नियमित रूपले राती सुत्ने बेला ओठमा लगाएर मसाज गर्ने ।
गुलाफको फूल ओठको कालोपन हटाउनका लागि गुलाफको फुल एक उत्तम उपाय हो । यसको नियमित प्रयोगले ओठको रंग हल्का गुलाफी र चम्किलो हुन्छ । तपाईंले गुलाफको फूलको पेस्टमा थोरै मात्रामा ग्लिसिरिन मिसाएर पनि लगाउन सकिन्छ ।
कागती . ओठको कालोपन हटाउन कागतीले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्छ । त्यसका लागि निचोरेको कागतीको बोक्रालाई ओठमा बिहान र साँझ रगड्नुपर्छ । कागतीको बोक्राले ओठको मसाज पनि गर्न सकिन्छ ।
मह . महको लेप ओठमा लगाउँदा कालोपनबाट छुट्कारा पाउन सकिन्छ । त्यसका लागि थोरै मह लिएर विस्तारै–विस्तारै ओठमा मसाज गर्नु पर्छ । ३ देखि ४ दिनसम्म नियमित यसो गर्नाले नतिजा सकारात्मक देखिन्छ ।,,,भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोस्,,,